अब लकडाउन बढ्छ कि बढ्दैन ? आज मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै : RajdhaniDaily.com -
Home प्रमुख अब लकडाउन बढ्छ कि बढ्दैन ? आज मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै
काठमाडौं । आज शनिबार ४ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने भएको छ । बैठकमा मुलुकभर लगाइएको लकडाउन र स्वास्थ्य सामग्री खरिदलगायतका विषयमा छलफल गर्ने एजेन्डा तय भएको छ ।
सरकारले २५ चैतसम्म लकडाउन घोषणा गरेको छ । कोरोना भाइरस संक्रिमत व्यक्ति खासै नदेखिएको अवस्थामा यसलाई निरन्तरता दिने नदिने बारेमा पनि मन्त्रिपरिषदमा छलफल हुने भएको छ ।
स्वास्थ्य सामाग्री खरिदको विषय अहिले विवादित बनेको छ । यो सम्बन्धमा पनि आजको बैठकमा छलफल हुनेछ । अन्य नियमित एजेण्डामाथि छलफल गरिने बताइएको छ ।
(Visited 4,909 times, 1 visits today)
काठमाडौं । अभिभावक महासंघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले नेपालमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर बढेकोले विद्यालयहरु सञ्चालन गर्न नहुने धारणा राखेका छन् । शुक्रबार रिपोर्टर्स क्लब...
सप्तरी, राजविराज । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले जिल्लामा दुई महिने लामो संगठन सुदृढिकरण तथा भ्रष्टाचार बिरुद्ध अभियान थाल्ने भएको छ । उक्त अभियानको...
काठमाडौं । नेपाली चलचित्र उद्योगका लागि २०७७ साल सबैभन्दा निराशको वर्ष बन्यो । वर्षभरिमा जम्मा चारवटा मात्र नयाँ नेपाली चलचित्र रिलिज भयो । त्यसैले...
को हुन् गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी ?
काठमाडौं । सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नयाँ गभर्नरमा नियुक्त गरेको छ । अधिकारी २०७३ असारदेखि लगानी बोर्डको सीईओका रूपमा...
काठमाडाैं । धितोपत्र बजारमा आज शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक झण्डै १५ अङ्कले घटेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार नेप्से १४.९९ ले घटेर...
भिर्नी झोलका गायक मेला महोत्सवमै व्यस्त
कला Kumar Raut - February 12, 2020 0
काठमाडौं । मेला महोत्सवमा खोजिने चर्चित नाम हो कृष्ण अँखेली । पछिल्लो समय धौलागिरिका प्रायः कार्यक्रममा उनको खोजी हुनेगर्छ । गत कात्तिकदेखि सुरु भएको...
प्रदेश १ Sushila Bishwokarma - December 11, 2020 0
दमक । झापाको कमल गाउँपालिका–७ स्थित गेउरिया सडकखण्डमा मालबाहक पिकअप भ्यान पल्टेर घाइते भएका एक जनाको ज्यान गएको छ । इलाका प्रहरी कार्यलय दमकका...
प्रेममय कविता लिएर आए ‘एटम’
Not-to-be-missed राजधानी समाचारदाता - March 28, 2021 0
काठमाडौं । कवि तथा समालोचक नेत्र ‘एटम’ले आफ्नो नयाँ कविता संग्रह ‘प्रिय मौनता’ पाठकमाँझ ल्याएका छन् । शनिबार राजधानीमा एक समारोहबीच यो पुस्तकको प्रा.डा....
चक्रपथ दोस्रो खण्ड विस्तार चीनको जिम्मामा
Editor-Picks टेनिस रोका - March 25, 2021 0
काठमाडौं । कलंकीदेखि महराजगन्ज–धोबीखोला चक्रपथ दोस्रो खण्ड सडक विस्तार अब चीन सरकारको जिम्मामा पुगेको छ । चक्रपथ विस्तार दोस्रो खण्डअन्तर्गत विस्तारका लागि पूर्वतयारी सकिएसँगै चीन...
चार सांसदको पद रिक्त हुँदै
भर्खरै राजधानी संवाददाता - April 8, 2021 0
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेका चारजना सांसदको पद रिक्त भएको सूचना दिने तयारी सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाले गरेका छन...
आर्थिक विकासमा कृषि र पशुपालनको महत्व
बिचार Kumar Raut - January 8, 2021 0
दूध, मासु, अन्डा, उन, श्रम आदिका लागि जनावरहरूलाई घरमा पाल्ने कामलाई पशुपालन भनिन्छ । पशुपालन जनावर वा पशुपक्षी पाल्ने पेसा हो । नेपालमा गाई,...
Exclusive Roshan Shrestha - March 11, 2020 0
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई साधारण मानिसझैं पहिलेकै अवस्थामा फर्किन कम्तीमा ६ महिना लाग्ने प्रत्यारोपणमा संलग्न चिकित्सकले बताएका छन् । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा...
अझैसम्म पनि सरकार कोरोनाको रोकथाममा गम्भीर बनेन : कांग्रेस
राजनीति Dhruba Lamsal - September 13, 2020 0
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सरकार कोरोना रोकथाममा अझैसम्म पनि गम्भीर नबनेको आरोप लगाएको छ। आज नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको संयोजकत्वमा गठित...
बालिकालाई अपहरणको शैलीमा उठाएर भतिजोसंग विवाह गराउन खोज्ने काका प्रहरी हिरासतमा
Not-to-be-missed Sushila Bishwokarma - February 10, 2020 0
मुगु । आफनो भतिजोलाई बालिका विवाह गराउन खोज्ने काकालाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ । हुम्ला जिल्ला चंखेली गाँउपालिका वडा नं १ दार्मा गाउँका सिंह...
अर्थ Dhruba Lamsal - December 1, 2020 0
राजधानी समाचारदाता - April 15, 2021
सत्यन श्रेष्ठ - April 10, 2021
धरापमा गण्डकी सरकार
विजय नेपाल - April 15, 2021